प्रचण्डलाई किन बढ्यो खतरा ? उनको सुरक्षामा बढाइयो सुरक्षाकर्मी? – Hamro24News
July 20, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्डलाई किन बढ्यो खतरा ? उनको सुरक्षामा बढाइयो सुरक्षाकर्मी?
काठमाडौं । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गृह मन्त्रालयले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत केही विशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षामा विशेष चासो राखेको छ । ओली सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै भीआइपीको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी घटाएको थियो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अध्यक्ष दाहाललाई पठाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीका १६ जना र २ जना नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा दिन मापदण्डमा उल्लखे छ। त्यस्तै, पूर्व राजाको हकमा पनि यही सङ्ख्या लागू गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई भने सेना समेतले सुरक्षा दिने मापदण्ड छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
किन लगाइयो माधव नेपालको घर बाहिर सुरक्षाको यति बाक्लो घेरा?
ओली निवास बालकोटमा विप्लव, के भयो छलफल?
फेरी लकडाउन हुने पक्का?